ဟိုး (အီ့) အန်းမြို့ကလေး၊ အလယ်ပိုင်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ – MoeMaKa Burmese News & Media
January 1, 2013 Aung Htet
Hoi An Town, Central Vietnam
ဟိုး (အီ့) အန်း မြို့သူကလေးများနှင့် မြို့မြေပုံ
အရှေ့ တောင်အာရှ၏အလွန်လှပသောပင်လယ်ကမ်းချေမြို့ကလေးတခုအကြောင်းကိုတင်ပြလိုပါသည်။ အလယ်ပိုင်းဗီယက်နမ် နိုင်ငံ၏ အရေးပါသောဆိပ်ကမ်းမြို့ကလေးတခုလည်းဖြစ်ပြီး အရွယ်အစားမှာပုဂံနှင့် ညောင်ဦးမြို့နယ်နှစ်ခုပေါင်းထားသည် လောက်ရှိမည် ဟု ထင်ပါသည်။ လူဦးရေအကျန်းအားဖြင့် တစ်သိန်းနှစ်သောင်း ခန့် ရှိမည်ဟု့ Wikipedia Encyclopedia ကရေး ထားပြီး အကျယ် အ၀န်း အားဖြင့် ၆၀ စတုရန်းကီလိုမီတာခန့် ရှိပြီး၊ ကျွန်းစွယ်လို အနေအထားပေါ်မှာ ရပ်ကွက် ၉ ခုဖြင့်ဖွဲ့ စည်းထားပါသည်။
မြို့တွင်းဈေးနှင့် မြစ်ဆိပ်ကမ်းဈေး၊ မိမိလယ်ရာထွက်ပစ္စည်းများကို အဓိကရောင်းနေသော လယ်သူများ
မြို့ကလေးမှာ မကြီးလှသော်လည်း UNESCO မှ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်မြို့ကလေးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်ကြောင့် အခြားဗီယက်နမ်မြို့များ နှင့်မတူဘဲ အစစလှပ သတ်ရပ်နေခြင်းမှာ အထူးချစ်စရာကောင်းလှပါသည်။ ခရစ်သက္ကရစ်အစပိုင်းလောက်ကထဲက တည်ရှိခဲ့သောရေ လုပ်သားရွာကလေးမှာ ၁၅ ရာစုခေတ်ရောက်သောအခါ၊ အရှေ့ တောင်အာရှ၏အရေးပါသောကုန်ကူး သန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဆိပ်ကမ်းမြို့ ကလေးအဖြစ်ထင်ရှားလာပါသည်။ ရာသီမရွေး လှေ သင်္ဘောကြီးများဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ပြီး ကုန်တင်ကုန်ချလွယ်ကူသော မြစ်ချောင်း များ ကုန်းတွင်းပိုင်းမှ စီးဆင်း ပြီး ဌင်းမြို့ကလေးမှ ပင်လယ်ထဲကို ပေါင်းစည်းကြပါ သည်။
ပြတိုက်မှာပြထားသော ရှေးဟိုး (အီ့) အန်းဆိမ်ကမ်းကိုဝင်ထွက်သော ကုန်တင်လှေနှင့် အရာရှိလှေတို့၏ပုံစံငယ်
ဟိုး(အီ့)အန်းမြို့၏ အနောက်မြောက် ကိလိုမီတာ ၃၀ ခန့် မှာ ဒါနန် (Danang) ဆိုသော တချိန်က မင်းနေပြည်တော်ကြီး ဖြစ်ခဲ့ဘူးသော မြို့ကြီးရှိပါသည်။ ဒါနန်မြို့မှာ မြန်မာစာဖတ်ပရိသတ်နှင့်မဝေးလှပါ။ အမေရိကန် ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲမှာလေတပ်ဗိုလ် ချုပ်ကြီး ငုရင်ကောင်ကီး (ကိုဝင်းဦး နှုပ်ခမ်းမွှေးမျိုးနှင့်) ဗီယက်ကောင်းများကို ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ရာမှာ အဓိကကြသောလေတပ် စစ်စခမ်းမြို့ဖြစ်ပါသည်။ ဌင်းမြို့မှဘဲ နောက်ဆုံးစစ်ပွဲအဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်လေယဉ်မောင်းပြီး ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခါ အမေရိ ကန်လေယဉ်တင်သင်္ဘော ကြီးပေါ်မှာခိုလှုံခွင့် တောင်းခဲ့သော သတင်းကို ကျနော်တို့လူပျိုပေါက်စက ဟီးရိုးကြီးသဖွယ်နောင် တော်ကြီးများက ရှင်းပြသည်ကို မမေ့နိုင်ပါခင်ဗျား။
ဆိပ်ကမ်းဘေး ကော်ဖီဆိုင်နှင့် Custom Made သားရေဖိနပ်ဆိုင်
ကျနော်တို့ငယ်ရွယ်စဉ်အခါက ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုရဲ့ -လူထုအောင်သံ- စာအုပ်ကိုလည်းဖတ်ဖူးသည်၊ ညစဉ်လိုလိုဘဲ အမေရိကန်မှ ပေးပို့လိုက် တဲ့ ကားသစ်ကြီးတွေ ရုပ်ရှင်ပြစက်တွေနဲ့ လမ်းဘေးမှာ အခမဲ့ပြတာကို မမြင်ခြင်မှအဆုံး၊ ကွန်မြူနစ်ကိုမုန်းခဲ့သည်။ နောက်ဗိုလ်ချုပ်အောင် ကြီးရဲ့ ကွန်မြူနစ်မုန်းတီးရေးကြောင့် အဖွဲ့ ချုပ်မှနှုပ်ထွက်ခဲ့ပုံများကို ယခုထက်တိုင် ဖတ်နေရတုံးကြားနေရ တုံးပါဘဲ။ မကုန်နိုင်လောက်အောင်များပြားလှတဲ့ အာကာဒတွေ သာကီဝင် မင်း မျိုးတွေနေတဲ့ ကမ္ဘာ့ထိတ်တန်း အယဉ်ကျေးဆုံး မြန်မာပြည်ကြီးမှာ ဘာပြုလို့အခုထက်ထိ ပြည်ဖုံးကားမချနိုင် ကြတာလဲ ? ? ? ။ အထူးသဖြင့် အရင်တုံးကကော အခုလူကြီးလုပ် အာဏာရနေတဲ့ လူတွေကော၊ နောက်အဏာရ လာ မဲ့လူကြီးတွေကိုကော ဘာပြုလို့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ သာဓကတွေကို မလေ့လာ မကြည့်ရှု မသုံးသတ်နိုင်ကြပါသလဲလို့ ? ။ ကျနော်မှားနေတာတွေ့ ရင် ထောက်ပြကြစမ်းပါ။
အမွှေးတိုင်တခါမီးညှိထားလျှင် တစ်လနီးပါးခံသော အမွှေးတိုင်အခွေကြီးများကို လုပ်သောမြို့ကလေး
ဗီယက်ကောင်း ကွန်မြူနစ်တွေကိုမုန်းလွန်းလို့ အကြိမ်ပေါင်းထောင်ချီပြီး ဗုံးကျဲခဲ့တဲ့ လေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးငုရင်ကောင်ကီး အခု ဘယ်မှာနေသ လည်း ? ။ အခုရေးနေတဲ့ ဒါနန်မြို့နဲ့ဟိုး (အီ့) အန်းမြို့ကလေး ကြားမှာရှိတဲ့အရှေ တောင်အာရှအလှဆုံးပင်လယ် ကမ်းခြေမှာ သူပိုင် ကြယ် ငါးပွင့် ဟော်တယ်ကြီးမှာ တနှစ် ၆ လဇိမ်ခံပြီး ၆ လ အမေရိကန်မှာပြန်နေတယ်တဲ့။ သူဇိန်ခံတာကို မနာလိုစရာဘာမှ မရှိပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့သိထားတဲ့ ဘုရားမရှိ တရားမရှိ ကွန်မြူနစ်ဗီယက်နမ်အစိုးရက ဘာပြုလို့တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသလဲ။ ကွန်မြူနစ်ချင်း အတူတူဘာပြု လို့ တရုတ်ပြည်မှာ ခွင့်မလွှတ်နိုင်တာကို ဗီယက်နမ်ကွန်မြူနစ်က ခွင့်လွှတ်နိုင်တာလဲဆိုတာကို နယူးယောက်က ကုလသမဂ္ဂအဆောက် အဦးကြီးမှာသွားရှာနေမှာလဲ။ ဟိုး (အီ့) အန်းမှာ ညအိပ်ညနေလမ်းလျှောက်ရင်း သုတေသနပြုပါလား သမိုင်းပညာရှင်ကြီးတို့ရယ်။ ကွန်မြူ နစ်တွေက – အ – နေလို့လား ? ၊ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက – မအ -တာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးမရတာဆိုရင်တော့ ၊ ကျနော် -အအ-ကိုဘဲ ကြိုက်တယ် – – –
မီးပုံးကလေးများရောင်းသောဆိုင်နှင့် ၀ယ်သူစိတ်တိုင်းကြ ရက်လုပ်ပေးသော မီးပုံကျွမ်းကျင်ဆရာ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားများ ဒါနန်မြို့က လေယဉ်ကွင်းမှာ ဆင်းပြီးမှ၊ ဟိုး (အီ့) အန်းကို ကားဖြင့်သွားရပါမည်။ မြို့ကလေးမှာ မကြီးလှ သော်လည်း၊ မြို့ကြီးများတွင်မရနိုင်သောလုပ်သားများ၏ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ၀ယ်သူစိတ်တိုင်းကြပြု ပြင်ပေးမှု အပြင်အောက် ပါ အချက်များကြောင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ခရီးသွားများ၏ နှစ်သက်ရာ စခမ်းကလေးတခု ဖြစ်ပါသည်။
နာမည်ကြီးလှသော Yaly (Custom Made) ဆိုင်ရှေ့မှာစောင့်နေသော ၀ယ်သူများနှင့် သားရေအမျိုးမျိုးချုပ်ဆိုင်
၁။ ဈေးချိုသာပြီး ၀ယ်ယူသူစိတ်တိုင်းကြ ချုပ်ပေးသောဆိုင်များတွင်၊ အ၀တ်စအမျိုးမျိုးကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်မည်သည့်ချုပ်ရိုး မျိုးက ကြာ ရှည်ခိုင်သည်၊ ချုပ်ရိုးသေသတ်သည်ကအစ ရှင်းပြပေးပါသည်။ ပထမနေ့တွင် အ၀တ်စရွေး၊ ပုံစံအတည်ပြု၊ ဈေးနှုံး သတ်မှတ်၊ ကိုယ်အ တိုင်းအတာပြုပြီး၊ နောက်တနေ့မှာ အစမ်းဝတ်၊ အကျင်းအကြယ်လိုသလိုပြင်ဆင်ပြီး။ တတိယနေ့မှာသွားယူရတာပါဘဲ။ အထူးသဖြင့် သုံးရက်ခန့် နေဖြစ်အောင် ဆွဲဆောင်ထားတာကို ကျနော့အနေနဲ့စိတ်တိုင်းမကြသော်လည်း၊ နောက်ပိုင်း မြို့တွင်းက အစားအသောက်များ တပ်မက်ပြီးသုံးရက်ဆိုတာနည်းတယ်လို့ထင်မိပါတယ် (အော်-လူဆိုတာတယ်ခက်ပါလား)။ အနောက်နိုင်ငံများမှ Custom Made များထက် ဈေးနှုန်းမှာ လေးပုံ တစ်ပုံခန့်သာရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့်သားရေ ဂျာကင်များ၊ ကုတ်အင်္ကျီများ၊ အမျိုးသမီးအ၀တ်အစား အမျိုးမျိုး များမှာ ချုပ်ရိုးကောင်းပြီးသေသတ်လှပါသည်။ ၀ယ်ယူသူ စိတ်တိုင်းကြချုပ်ပေးသော ဆိုင်အများ ရှိသော်လည်း၊ Yaly ဆိုသောဆိုင်မှာ မြို့တွင်း တွင် သုံးဆိုင်ရှိပြီး ၀ယ်ယူသူများ ပြည့်နေ တပ်ပါသည်။ ဈေးနှုံမှန်ပြီး အတက်အကျမရှိလှပါ၊ လက်ရာ ကောင်းသည်၊ နမူနာအစများသည်ကြောင့် နိုင်ငံခြားသားများပြည့် နေတပ်ပါသည်။ ရောက်လျှင်ကြည့်သင့်သောဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပါသည် (Web site: www.yalycouture.com).
အပူဒဏ်ကိုခံနိုင်အောင် အိမ်အမိုးတွင် နွယ်ပင်များနှင့် ငှက်အိမ်များချိတ်ဆွဲထားတပ်ပါသည်။
၂။ ၀ယ်သူ စိတ်တိုင်းကြ ချုပ်ပေးသော ရှူးဖိနပ်များ၊ သားရေဂွင်းထိုး ညှပ်ဖိနပ်များ၊ အမျိုးသမီး ဒေါက်ဖိနပ် ဆိုင်များလည်း အများအပြားရှိပါ သည်။ ဌင်းတို့အထဲက The Pretty Stars (www.kimanhshoes.com) ဖိနပ်ဆိုင်ဟာလည်း ဖေါက်သည်များဖြင့်ပြည့်နေတပ်ပါသည်။ အနောက်နိုင်ငံ ကုန်တိုက်ကြီးများတွင်ပြထားသော ဒေါ်လာ ၅၀၀ ~ ၆၀၀ တန် သားရေဖိနပ်များ ကို Custom Made ဒေါ်လာ ၈၀ ~ ၁၀၀ လောက်နှင့် ရနိုင်ပါသည်။ အထက်ပါ အ၀တ်အစားများအတိုင်း၊ အတိုင်းယူပြီး နောက်တနေ့ အကျဉ်းအကြယ် ပြင်ဆင်ပေးပါသည်၊ လက် ရာနှင့် ချုပ်ရိုးသေသတ်ပြီး ကော်ကပ်များမဟုတ်ပါ။ အထက်ပါအ၀တ်များချုပ်သော Yaly ဆိုင်တွင်လည်း ဖိနပ်မျိုးစုံ Custom Made ရပါ သည်။
၃။ လက်ဝတ်ရတနာ ပစ္စည်းများလည်း ၀ယ်သူစိတ်တိုင်းကြလုပ်ပေးသော ဆိုင်များလည်း ရှိပါသည်။ မိမိယူလာသော ကျောက်မျက် ရတနာ များကို ရွှေ ငွေ ပလတ်တီနမ်များဖြင့် ပုံစံအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ပေးပါသည်။ ဟိုး(အိ့)အန်းမြို့ကလေး၏ ရှေးအစဉ်အဆက် ထဲက တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပန်းတိန်အကျော်အမော်များ မင်းပစ်မင်းဒါဏ်၊ သို့ မဟုတ် လက်ရာအကောင်းဆုံးပြုလုပ်ပြီးပါက သက်ဦးစံပိုင်တို့၏ အငြိုငြင်မခံရမှီ ထွက်ပြေးလာရသော အနုပညာအကျော်အမော်များ စုစည်းရာအရပ် ဖြစ်နေသောကြောင့်၊ လက်ရာ နှင့်ခိုင်ခန့် ပုံမှာ စံတင်ထားလောက်သော နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်က ထိမ်းသိမ်းလာသော အနုပညာရှေး ဟောင်းအိမ်ကြီးများကို ယခုမှရောက်လာသော လက် သင်များ ပညာဆည်းပူးရန်သာဖြစ်ပြီး၊ ဈေးကွက်ကို ၀င်မတိုးနိုင်ပါ။
မြို့တွင်း အိမ်ဆိုင်များနှင့် လမ်းသွယ်များ။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့်ကားများကို အချိန်ပိုင်းနှင့်သာဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ပြုထားပါသည်။
၄။ ဟိုး(အီ့)အန်းမြို့ကလေး၏ ကျနော့်အကြိုက်ဆုံးကို ပြောရရင် – အလယ်ပိုင်း ဗီယက်နမ်စားသောက်ဖွယ် ဆိုင်များပင်ဖြစ်ပါသည်။ အများ အားဖြင့် ဗီယက်နမ်အကြိုက်၊ ဆီနည်းပြီး လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပါနေခြင်းကြောင့်၊ မြို့ထဲတွင် လူဝကြီးများတွေ့ ရ ခဲပါသည်။ ကျနော့်အကြိုက်ဆုံးများထဲမှတစ်ခုကို ဖေါ်ပြရလျှင် – ပေါက်စီနှင့် တွဲဖက်၍စားသော ၀က်သားပေါင်းဖြစ်ပါသည်။ ၀က်သားပေါင်း လို့ ကျနော်တို့ဗမာတွေခေါ်ပေမဲ့လည်း ၀က်သားမပါပါ။ သူတို့အခေါ် White Rose လို့ခေါ်ပြီး အကြည်ရောင် ဂျုံဝိုင်းကလေးကို နှင်းဆီပန်း ပုံဖေါ်ပြီး အထဲတွင် ပုဇွန်ကျော့ကလေးများပေါင်းထားသည့်အရသာကို မမေ့နိုင်တော့ပါ။ အဲဒီ့ ပုဇွန်ပေါင်းကို တမြို့လုံးမှာ တစ်အိမ်ထောင် ထဲကသာလုပ်ပြီး အစဉ်အဆက်လုပ်လာသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၁၂၀ ရှိပါပြီးတဲ့၊ မြို့တွင်းကဆိုင်တိုင်းလိုလိုမှာနေ့တိုင်း ဖြန့် ဝေတင်ထားပါတယ်၊ နောက်တနေ့ အကျန်ပြန်ရောင်းတာမရှိပါတဲ့။ တခြားနိုင်ငံခြားသားများ စားသုံးတာကတော့၊ ကျနော်တို့ ရန်ကုန်က ကြာဇံကျေးအိုး လိုဟာမျိုးကို – ဘုံချာချာ- လို့ခေါ်ပြီး၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လိပ်ယူရသော ကော်ပြန့် စိမ်းနှင့် မိန်ရေရှက်ရေ စားသုံးနေကြတတာကို သွားရည် ယိုမိပါသည်။ ကျန်စားသောက်စရာများကို အထူးရေးနေစရာမလိုတော့ပါ၊ တကယ်သုံးရက်ထဲနေရတာကို အပြစ်တင်မိပါသည်။ ပင်လယ် ကမ်း ခြေသွား ရေကူး ဆော့ကစားပြီး ထမင်းဆာဆာနှင့် မြို့ထဲကစားသောက်ဆိုင်မှာ တနေ့ပြီးတနေ့ မတူတာတွေမှာစားနေခဲ့တဲ့ သုံးရက် ဟာ လျှပ်တစ်ပြက် ဟိုး (အီ့) အန်းလို့ထင်ခဲ့ပြီး၊ နောက်တခါဆိုရင်တော့ ၇ ရက်အနည်းဆုံးနေမယ်လို့ (အလုပ်ရှင်ခွင့်ပြုရင်ပေါ့လေ)။ အစား အသောက်ဝါသနာပါသူများ www.hoian famous food.com မှာဖွင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကော်ပြန့်ကျော်နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ဆိုင်တိုင်းလိုလိုတွင် ရနိုင်ပါသည်
များသောအားဖြင့် စားသောက်ဆိုင်အတော်များများကို ကျနော်ကြိုက်ပါသည်။ UNESCO ၏ကြီးကျပ်ညွှန်ကြားမှုများအရ တခု နှင့်တခု များစွာမတူလှပါ။ ပြင်ဆင်မှုထူးခြားတဲ့ ဆိုင်တစ်ခုအကြောင်းပြရရင် Morning Glory (www.restaurant-hoian.com) ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်၏ အလယ်မှာ စားဖိုမှူးနှင့် မီးဖိုကိုပြပြီး ချက်ပြုတ်ပါသည်။ သေသေသတ်သတ် ကျွမ်းကျင်မှုကို စကားတစ်ခွန်းမှမပြောပဲ ချက်ပြုတ် ပြသွားသည် မှာအထူးအဆန်းဖြစ်နေပါသည်။ ဟိုး (အီ့) အန်း အစားအသောက်များမှာ ဗီယက်နမ်ပုံစံက အဓိကဖြစ်နေသော်လည်း၊ တရုတ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျပန် အစားအစာများ၏ ကောင်းနိုးရာရာများကို ပါးပါးကလေး လှီးထဲ့ထားတာကိုက အနောက်နိုင်ငံအခေါ် လုံးလုံးကြီး Fusion လို့ခေါ်ရန် လည်း ကျနော်မဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါ။ နောက်တစ်ခါရောက်ခဲ့ရင်တော့ ပိုမို သေခြာတဲ့အဖြေနှင့်တင်ပြပါဦးမည်။
ပင်လယ်ကမ်းချေမှာ ခရုကောက်နေတဲ့ ကောင်ကလေးက ပင်လယ်ထဲမှာ ဘာရှိသလည်း ဆိုတာဘယ်သိနိုင်ပါ့ မလည်း။ အဲဒီ့လိုဘဲ ဟိုး(အီ့)အန်း ကစားသောက်ဆိုင်တွေမှာ စားကောင်းတာသာသိတဲ့ ကောင်ကလေးဟာ ဘာ့ကြောင့်ကောင်းတာလဲလို့မေးရင် ဘယ်လိုဖြေရပါ့ မလည်း။ သို့သော် ကျနော်တို့နဲ့အတူပါလာတဲ့ ခရီးသည်တွေ ထဲမှ ဂျပန်စားဖိုမှူး ပြောတာ ကတော့ – သူတို့အစား အသောက်ပြင်ဆင်တာကော၊ ချက်ပြုတ်တာတွေထဲမှာ (Chikara, Power & Force) အင်အားတွေပါနေ တာကြောင့် မတိန်ကောနိုင်ဘဲ လူထုရှာမှာ အမြဲစွဲကျန်ရစ်စေလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။ ကျနော်လို လူဗိန်းတစ်ယောက် ဘယ်လို လုပ်ပြီး ခင်ဗျားစကားကိုနားလယ် နိုင်မှာ လည်းလို့မေးတော့။ အကျန်းအားဖြင့် ခင်ဗျားနားလယ် အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်၊ Scotch Whisky ဘာပြုလို့အတုမလုပ်ထာလည်း၊ မလုပ်နိုင်လို့မဟုတ်ဖူး၊ နေရာနဲ့ဒေသ Place ကို မတူနိုင်တာကြောင့် မလုပ် ကြတာဘဲတဲ့။ ကျုပ်တို့ဂျပန်တွေဟာ သူများနိုင်ငံက ကောင်းနိုးရာရာတွေကိုယူလာပြီး၊ ဂျပန်မှုပြု တယ်၊ နောက်ပြီး သူ့ မူရင်း ထက်ကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ဥပမာ Tea Ceremony, Ikebana (Flower arrangement) တို့ဆိုတာ ဂျပန်က မူရင်းမဟုတ်ဖူး၊ ရှေးတရုတ်ပြည်ကြီးကယူလာတာ။ အခုဆို ကမ္ဘာကသိနေတာက ဂျပန်မူရင်းလိုလိုသိနေကြတယ်။ အဲဒါမျိုးတွေအ များကြီးဘဲ၊ ဒါပေမဲ့နေရာဒေသအစွဲကြီးလှတဲ့ Scotch Whiskyကိုတု လည်းအပိုဘဲဆိုတာကို ဂျပန်တိုင်းမွေးရာပါသိနေ ကြတယ်၊ ဘယ်သူ မှမသင်ပြဘူး။ သူပြောတာတွေကျနော်အားလုံးအကုန် နားမလည်နိုင်ပါခင်ဗျား၊ ကျနော့ထက် ပညာဉာဏ်ကြီးသူများ နောင်လာ နောက်သား များအား သွန်သင်ဆုံးမနိုင်အောင် တင်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
အလယ်ပိုင်းဗီယက်နမ် အစားအစာများမှာ ဆီနည်းပြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတာကြောင့် လူဝကြီးများကိုမြင်ရခဲပါသည်။
ရှေးဟောင်းမြို့ကလေးဖြစ်သည်ကြောင့် ရှေးပုံစံအတိုင်း၊ ပြင်ဆင်ထားသော သမိုင်းဝင်အိမ်များ၊ ဘုရားကျောင်းများ၊ ရှေးအစည်းအဝေး ခန်းမများ၊ ပြတိုက်အမျိုးမျိုး၊ အိုးနှင့်ကြွေရည်သုတ်လုပ်ငန်းများ အလုပ်ရုံများ စသည်ဖြင့်စိတ်ဝင်စားစရာ သုတေသီများအတွက်ကုန်ကျန်း ကော ကုန်ချောပါထုပ်လုပ်ရာမြို့ကလေးဖြစ်နေခြင်း၏ နောက်ကွယ်ရာမှာ UNESCO မှ ကျွမ်းကျင် ပညာ ရှင်များ၏ လက်ရာဆိုလျှင်မမှား နိုင်ပေ။ ဗီယက်နမ်အစိုးရ၏ မူဝါဒများမှာ၊ အခြေခံလူတန်းစားများ စားဝတ်နေရေး မြှင့်တင်ပေးရေး သာလျှင်အဓိကဖြစ်ပြီး၊ World Heritage Site ဖြစ်လာရေးမှာ၊ UNESCO ကိုအားလုံးနီးနီးလွှဲထားသောကြောင့်၊ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များ ဗီယက်နမ်ယဉ်ကျေး မှုကို လေ့လာရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်ပါသည်။
အမှန်အတိုင်းကိုဝန်ခံရလျှင် ကျနော်တို့ပုဂံမြေဟာ ပိုပြီးရှေးကြပါသည်။ အံမခန်းနိုင်လောက်အောင် ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များဒုနှင့်ဒေး ရှိပေမဲ့လည်း၊ UNESCO ၏ကြည့်ရှု့ စောင့်ရှောက်ခြင်းကို မခံရပါ၊ အကြောင်းရင်းအဓိကမှာ ကျနော်တို့၏ ထိပ်ဆုံး မှလူကြီးများ ငါတ ကောကောခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဆိုလျှင် လွန်ရာကြမည်လာ ? ။ ထိုင်း – ဘန်ကောက် အခြေစိုက် UNESCO မှတာဝန်ခံ ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦးနှင့် စာရေးသူတွေ့ ဆုံစဉ်အခါက မေးဘူးပါသည် – ဘာပြု့ လို့ပုဂံကိုပြုပြင်ဘို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်အဖြစ်မသတ် မှတ်သေးတာလည်းလို့မေးကြည့်တော့ – ၊ သူတို့ UNESCO ကတားနေတဲ့အထဲက ဘုရားတွေဖြိုပြီး ဂေါက်ကွင်းဆောက်တယ်၊ တချို့ရှေး ဘုရားတွေ ဂေါက်ကွင်းအလယ်မှာထားခဲ့ပြီး ဂေါက်ရိုက်တော့ ဘုရားကိုသွားမှန်တယ် – ကောင်းသလားတဲ့ ? ။ ဂေါက်ကစားသူ တွေအတွက် အဆင်ပြေစေရန် ဂေါက်ကွင်းအ၀င်ဝနားမှာ ဟော်တယ်တွေ ကလပ်တွေဆောက်တယ်၊ ရှေးဟောင်းပုဂံကိုအ၀င်ဝ မင်းလမ်းမကြီး ခါးဖြတ်ပြီး မြေညှီ့ စက်ကြီးဖြင့်ထိုးလိုက်တော့ အပိုင်းပိုင်းပြတ်သွားတယ်၊ လူထုကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်၊ ဘယ်မှာလည်း ထင်သာမြင်သာဆိုတာ။
ရွှေရောင်တွေဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတဲ့ နေပြည်တော်ကြီးလို့ မာကိုပိုလိုရဲ့ ခရီးသွားမှတ်တမ်းမှာရေးထာတယ်။ ရှေးဟောင်း Sky-line ကြီးပျက်စီးသွားမှာ စိုးလို့မျှော်စဉ်ကြီးမဆောက်ဖို့ တားနေတဲ့အထဲက ပြီးအောင်ဆောက်ပစ်တယ်။ ဘုရားတည်ကထဲက ထီးမရှိတဲ့ ဘုရား တွေကို ရွှေချပြီး ထီးတင်တယ်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေဆိုတာ ပျောင်ပျောင်လက်လက်တွေကို ကြည့်ခြင်လို့ လာတာမဟုတ်ဖူး။ သမိုင်းနဲ့မြန်မာ့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုကို လေ့လာခြင်လို့လာတာ။ အခုတော့ အာဏာရှင်ကြီး ပါစပ်ဆော့ထားတာတွေပဲတွေ့ ရတယ် လို့UNESCO ကျွမ်းကျင်သူက ထောက်ပြသွားတုံးက ကျနော် ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့နေခဲ့ရတယ်။
နိဂုံးအနေနဲ့။ ။အစိုးရက ပညာရှင်များနှင့် တိုင်ပင်ပြီး ထင်သာမြင်သာ မူဝါဒတွေချပြရမယ်။ UNESCO က အတွေ့ အကြုံနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကို လူထုပညာပေး ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင် Technical Support ပေးရမယ်။ တကယ်အကျိုးအမြတ်ခံစားရမှာက လူထုဘဲ ဖြစ်ရမယ်။ အကြံပြုခြင်း သာဖြစ်ပါတယ်၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပပညာရှင်များ စုဝေးပြီးသော်ဌင်း၊ အခုလို မိုးမခစာစောင်လို လူထုပညာပေးစာစောင်တွေမှာ အကြံဥာဏ် များတင်ပြပြီး Brain Storm လုပ်ရင် မကောင်းဘူးလား ? ။ ခေတ်ဟောင်းက အာဏာရှင် – ချိန်းဗရီး – တွေတော့နေရစ်ပါတော့၊ မိအေး နှစ်ခါနာ မဖြစ်စေခြင်လို့ပါ – – – –
← ကာတွန်း စောငို – ၂၀၁၃ မှာ နင့်အတွက် နေရာမရှိဘီ
ဒီကနေ့ ပွဲစဉ် →
3 thoughts on “ဟိုး (အီ့) အန်းမြို့ကလေး၊ အလယ်ပိုင်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ”
ဖတ်လို့တော့ကောင်းပါတယ်။ သိပ်မှန်ကန်မှု့တော့မရှိဘူး။ ဥပမာ ဒါနန်ကတချိန်က မင်းနေပြည်တော်ကြီး ဆိုတာမဟုတ်ပါ။ ဒါနန်ရဲ့ မြောက်ဘက်က တောင်တစ်ဖက်က ဟွေးမြို့က Imperial City ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ လေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးငုရင်ကောင်ကီးက ၂၀၁၁ ဇူလိုင်မှာဆုံးသွားပါပြီ။ နောက်က အခေါ်အဝေါ်တွေပါ ဟိုး(အီ့)အန်းအစား ဟွေအန်း၊ ငုရင်အစား ငွင်း ဆိုရင်ပိုဆီလျော်ပါတယ်။ မှတ်ချက်။ ကျွန်တော် ဟွေအန်းမှာ လက်ရှိနေထိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါမှတ်ချက်များအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တိုတောင်းလှတဲ့ သုံးရက်အတွင်းမှ ခရီးသွာတစ်ယောက်အတွက် ဧည့်လမ်းညွှန် ရဲ့ရှင်းပြခြင်းကို အားပြုပြီးမှတ်သားထားမှုအပေါ်မှာသာ အခြေခံရေးသားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုတိကြတဲ့ မှတ်တမ်းတွေကိုတော့ ဌာနေမှာရှိတဲ့သူတွေက ကွင်းဆင်သုတေသနပြုပြီးရေးသင့်ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်အခေါ်အဝေါ်တွေကတော့ မြန်မာမှုပြုပြီးသားစာလုံး တွေအတိုင်းပြန်သုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၆၀ – ၇၀ ခုနှစ် ဆယ်စုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်က မြန်မာ့သတင်းစာတွေမှာပါတဲ့ ငုရင်ကောင်ကီး ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံး တွေအတိုင်း မမှန်ပေမဲ့ စာဖတ်ပရိဿရင်းနှီးပြီးသား အမည်တွေကိုသာသုံးခဲရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကရင်အမျိုးသမီး တစ်ဦးရဲ့ အမည်ရင်းက နော်တလူးစေး လို့ ခေါ်ပေမဲ့ မြန်မာသတင်းစာတွေမှာ ပါ မြဲပါတာက နို့ တစ်လုံးစိန် ဆိုပြီးပါနေတာကြောင့် အများက နို့ တစ်လုံးစိန် ဆိုပြီးရေးမှသိပါတော့တယ်။ စာရှုသူများ အမှန်ကို သိရှိရပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အသံထွက်အမှန်အတိုင်း ပြုပြင်၍ ဖတ်ပါရန်နှိုးစော်အပ်ပါသည်။